Articles Archives - Nurture Preschool | International Standard Integrated Preschool
မိဘတိုင်း ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အုပ်ထိန်းမှုအမှား ( ၉ ) ခု
မိဘတိုင်းက သားသမီးတွေကို ကောင်းမွန်တဲ့သူဖြစ်စေချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့မိဘတွေက ကလေးတွေရဲ့စိတ်ကို နားမလည်တာ ဒါမှမဟုတ် သားသမီးကို ထိန်းချုပ်တဲ့ အုပ်ထိန်းမှုတွေက မှားယွင်းတာ ကြာင့် ကလေးတွေမှာ ဒီလိုပြဿနာလေးတွေ အနည်းငယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ငယ်စဉ်ကတည်းက အုပ်ထိန်းမှု မှန်ကန်မှသာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ထက်မြတ်တဲ့ကလေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတယောက်သည် ဒေါသထွက်ပြီး သည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိတာက မိဘရဲ့ ဂရုစိုက်မှု မရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးသည် သတိပြုမိခံရဖို့က်ို ဘ်ာလိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ရိုးရှင်းစွာ မသိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။
သင့်ကလေးသည် မကြာခဏ ငြူစူခြင်းနှင့် မနာလိုစိတ်ကို ပြသလျှင် သင်သည် ကလေးကို တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် မကြာခဏ နှိုင်းယှဉ်လွန်းတာကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ကလေးသည် ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ သူ့ဘာသာသူ မရပ်တည်နိုင်ခြင်းက အခြာသူများရဲ့ရှေ့မှာ သူ့ကိုနှိမ့်ချပြီး ပြောဆိုတာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
သူ့ မောင်နှမတွေရှေ့မှာတောင်မှ သင်ဘ်ာတော့မှမပြောသင့်ပါဘူး ။
သင့်ကလေးသည် လျှို့ဝှက်ပြီး ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့နေခြင်းက သင့်ရဲ့ လွန်ကဲတဲ့ဒေါသထွက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ကလေးသည် အလွန်အမင်းရှက်ကြောက်တက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သာဒခြင်း မရှိတာက သူ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အရာတွေကို သင်ကူညီဖို့ အမြဲတမ်းကြိုးစားတာကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
သင့်ကလေးက လိမ်ညာနေပါက အရင်က သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတွေကို သင်ဟာ ကြမ်းတမ်းစွာ တုံ့ပြန်လွန်းတာကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
သင့်ကလေးသည် အခြားသူတွေကို မလေးစားဘူး ဆိုပါက သင်သည် ကလေးရဲ့ ခံစားချက်တွေကို အသိအမှတ်မပြုပဲ ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
ကလေးတစ်ဦး ရိုင်းစိုင်းတယ်ဆိုပါက သူသည် သူ့မိဘများ သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးရဲ့ အပြုအမူကို အတုယူပြီး လိုက်လုပ်တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သူမ လိုချင်တဲ့အရာရာတိုင်းကို သင်ဝယ်ပေးပေမဲ့ သူမက အမြဲတမ်း အခြားကလေးတွေရဲ့ အရုပ်တွေကိုပဲ ယူနေတယ်ဆ်ိုရင် သင်သည် သူမကို ရွေးချယ်ဖို့ အခွင့်အရေး မပေးထားဘူးလို့ ဆိုလိုပါတယ် ။
သားသမီးတွေကို လိမ္မာစေချင်ရင် အရမ်းအလိုမလိုက်ပါနဲ့
သားသမီးတွေကို လိမ္မာစေချင်ရင် အရမ်းအလိုမလိုက်ပါနဲ့ သူတို့ကို သွန်သင်ပါ
လူရော စိတ်ပါ အရမ်း ပင်ပန်းပါတယ် ဒါပေမယ့် ငယ်တုန်းမှာ သွန်သင်ပါ
အိမ်မှာ အလုပ်ခိုင်းပြီးမှ မုန့်ဖိုးပေးပါ
လောက မှာ ဘယ်အရာမှ အလကားမရတဲ့ အကြောင်း သူတို့ ခေါင်းထဲ စွဲနေအောင်သင်ပါ
ဘယ်လောက်ပဲ ချမ်းသာ ချမ်းသာ မုန့်ဖိုးက အစ အလကားမပေးနဲ့ ဘာလိုချင်ချင် အလကားမဝယ်ပေးနဲ့
မုန့်ဖိုးလိုချင်လား သချာင်္ဘယ်နှစ်ပုဒ်တွက်ရင် ဘယ်လောက်ပေးမယ် deal လုပ်ပါ
တခုခုပူဆာရင် အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်ကူခိုင်းပြီး point တွေပေး ပြီး ပွိုင့်နဲ့ ပိုက်ဆံ လဲခိုင်းပါ
ဥပမာ ပန်းကန်တွေ ဆေးရင် ၅ မှတ်
တံမြက်စည်းလှည်းရင် ၅ မှတ် ကားရေဆေးပေးရင် ၁၀ မှတ် စသဖြင့် ခိုင်းပြီးမှ ၁ မှတ်ကို ၁၀၀၀ ကျပ်နှုန်းနဲ့ သူတို့ လုပ်သလောက် ပိုက်ဆံရှင်းပေးပြီး မှ သူတို့လိုချင်တာ ကိုယ်တိုင်ဝယ်ခိုင်းပါ
သူတို့ကို ငယ်ကတည်းက ရှင်းအောင်ပြောပါ
စားသောက်တာ သုံးစွဲတာ အခြေခံပဲ မိဘက ပေးမယ် လိုချင်တဲ့ အပိုတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာရမယ်လို့ သင်ပေးပါ
ပိုက်ဆံကို ကိုင်တွယ်သုံးစွဲတတ်တဲ့ management ကို ငယ်ကတည်းက သင်ပါ။
ကလေးတွေကို သင်လို့ ရတဲ့ အရွယ်က၄-၅ နှစ်ကနေ ၁၂ နှစ် ၁၃ နှစ်လောက် ထိပဲ ကိုယ်လိုချင်သလို သင်လို့ ရတယ် ဒီထက်ကြီးမှ သင်ရင် မနာယူ ချင်ဘူး ကလန်ကဆန်လုပ်တဲ့ အရွယ်မှ စ သင်ရင် အလကားပဲမို့ ငယ်တုန်းသင်ဖို့ တိုက်တွန်းတာပါ
ငယ်ငယ်တုန်းက အမေက ကြက်ဥသွားဝယ်ပါအုံး ဘာလေး သွားဝယ်ပါအုံးနဲ့ ခိုင်းခဲ့လို့ ငွေကို ဘယ်လောက်ပေး ဘယ်လောက်ပြန်အမ်းရမယ် လို့ စိတ်နဲ့ တွက်တတ်လာပါတယ်
ခုခေတ်ကလေးတွေ ဈေးတွေဘာတွေ ကိုယ်တိုင်မဝယ်ဖူးလို့ ဘယ်လောက်ပေးလို့ ပေးလောက်အမ်းရမယ်ကို စိတ်တွက်နဲ့ မတွက်တတ်ကြပါဘူး
သမီးကြီးဆို စိုးရိမ်လွန်ပြီး ဥ ထားခဲ့မိလို့ ပိုက်ဆံ မတွက်တတ်ဘူး
လက်တွေ့ အသုံးချ သချာင်္ ပေါင်းနှုတ်မြှောက်စားကို စိတ်နဲ့ တွက် တတ်အောင် သင်ပါ
ဖဲချပ်ကစားနည်း မိုနိုပိုလီကစားနည်း ဈေးရောင်းတန်းကစားနည်း တို့ နဲ့ ကစားရင်း သင်လို့ ရပါတယ်
အရွယ်ရောက်လာရင် အိမ်ရဲ့ စီးပွားရေး ဘာညာ သူတို့ ကို ပြောပြ လူရာသွင်းတိုင်ပင်ပါ ။ ဝ မရှိပဲ ဝိလုပ်ချင်တဲ့ စိတ်မျိုး မဝင်အောင် အထူးသင်ပါ ။ အဲဒီစိတ်က နောင်တချိန်မှာ သူများဝတ် ဝတ်ချင် သူများစား စားချင် နဲ့ အတော်ကို ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ် ။ ကိုယ့်မှာ ရှိတာနဲ့ လောက်ငှအောင် သုံးတတ်ဖို့ တကယ်လို့ အကောင်းကြိုက်တယ်ဆို အလုပ်ကြိုးစားဖို့ concept ကို ငယ်ကတည်းက ခေါင်းထဲ ရိုက်သွင်းပါ ။
မိဘ ဟာ အခြေခံ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ပဲ တာဝန်ရှိတယ် ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကိုယ်ရချင်တဲ့ reward ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုးစားရမယ် ဆိုတာ ပြောပြပါ ။
ကိုယ့်သားသမီး ကို ကိုယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် သူတို့ ခြေထောက်ပေါ် သူတို့ မြဲမြံစွာရပ်တတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးပါ။
မိဘမို့ သူတို့ ပင်ပန်းမှာစိုးလို့ မေတ္တာစေတနာတွေနဲ့ လုပ်ပေးချင်တိုင်း ပိုးအိမ်ထဲက ဖောက်ထွက်မယ့် လိပ်ပြာလေး အဖြစ်ကို အမြဲ သတိရပါ ။ သနားလို့ ပိုးအိမ်လေးကို ဖောက်ပေးလိုက်ရင် ပျံသန်းရမယ့် အတောင်ပံတွေ အားမရှိတော့မှာမို့ သူ့ဟာသူ ဖောက်ထွက်ခွင့်ပေးပါ ။
ကလေးတွေကို ကျောင်းစာပဲ အရမ်းတော်နေတာထက် အပြင်မှာလည်း လည်လည်ပတ်ပတ်ရှိအောင် သင်ပါ ။ ဘာသာစကား အနည်းဆုံး ၃ မျိုး တတ်အောင် သင်ပါ ။ တူရိယာ တခုခုတီးတတ်အောင် သင်ပါ ။ တချိန်လုံး စာချည်း မကျက်ခိုင်းပဲ မျှ တအောင် သင်ယူခိုင်းပါ ။
သူတို့ကို ချစ်ရင် ဘယ်အရာမှ သူတို့ ကို အလကားမပေးပါနဲ့ ။ လူဟာ ကိုယ့်ငွေ ကိုယ်ရှာသုံးမှ ငွေကို တန်ဖိုးထားတတ်တယ် ။ အလုပ်ကို တန်ဖိုးထားတတ်တယ် ။ လွယ်လွယ်ရရင် တန်ဖိုးမထားဘူး။ ကိုယ်ရှာတာ မဟုတ်ရင် တန်ဖိုးမထားဘူး ။ ကိုယ်တိုင်ခက်ခက်ခဲခဲရှာရမှ တကျပ်မှာလည်း တ ကျပ်တန်ဖိုးရှိတာ သူတို့ မြင်တတ်လာမယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တစုံတခု တစုံတယောက်ကို ကြည့်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စေ့နှစ်လုံးလုံးဟာ လိုက်လျောညီထွေ လိုက်ရွေ့ကြည့်ရပါတယ်။
ဥပမာ ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုကိုကြည့်ရင် ဘယ်မျက်စေ့ရော၊ ညာမျက်စေ့ရောဟာ ဘယ်ဘက်ကို ရွေ့လျားကြပါတယ်။
ထို့အတူ ညာဘက်မှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုကိုကြည့်ရင်လည်း ဘယ်မျက်စေ့ရော၊ ညာမျက်စေ့ရောဟာ ညာဘက်ကို ရွေ့လျားကြပါတယ်။
မျက်စိစွေတယ်ဆိုတာဟာ တစုံတခု တစုံတယောက်ကို ကြည့်တဲ့အခါ မျက်စေ့နှစ်လုံးမှာ တလုံးကပဲလိုက်ရွေ့ကြည့်ပြီး ကျန်တဲ့တလုံးက လိုက်လျောညီထွေ လိုက်မရွေ့ကြည့်နိုင်ဘဲ အပေါ်၊ အောက်၊ အတွင်း၊ အပြင် စတဲ့နေရာတွေ ရောက်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်စိတလုံးနဲ့တလုံး အလိုင်းမင့် (alignment) မညီတာပါ။
မျက်စိစွေတာကို ဆေးပညာအရ squint သို့မဟုတ် strabismus လို့ခေါ်ပါတယ်။
– မျက်စိနှစ်လုံးက မညီတာ
– တစုံတခု တစုံတရာကိုကြည့်ရင် မျက်လုံးနှစ်လုံးက လိုက်လျောညီထွေမရွေ့ဘဲ ဖြစ်နေတာ
– အမြင်အာရုံလျော့နည်းလာတာ၊ ဝေဝါးလာတာ
– မိမိနဲ့ အရာဝတ္ထုတွေအကြား အကွာအဝေးကို မခန့်မှန်းနိုင်တာ စသဖြင့်ပါ။
ဒီလက္ခဏာတွေက အမြဲဖြစ်နေတာမျိုးလည်းရှိသလို တချို့တွေမှာဆိုရင် ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်နေတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုလက္ခဏာတွေ မိမိကလေးမှာဖြစ်နေပြီဆိုပါက နီးစပ်ရာဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းပြသပြီး မျက်စိစွေခြင်းဟုတ်မဟုတ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။
စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်လို့ မျက်စိစွေခြင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အချိန်မဆွဲဘဲကုသဖို့လိုပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မျက်စိစွေနေပါက တစုံတခု တစုံတရာကို ကြည့်တဲ့အခါ မျက်စိနှစ်လုံးက လိုက်လျောညီထွေလိုက်မရွေ့တဲ့အတွက် ဦးနှောက်က ပုံရိပ်နှစ်မျိုးကို လက်ခံရရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီအခါမှာ ဦးနှောက်အနေနဲ့ ရှုပ်ထွေးသွားကာ ရှုပ်ထွေးမှုကို ကုစားတဲ့အနေနဲ့ လက်ခံရရှိတဲ့ ပုံရိပ်နှစ်မျိုးထဲက အားကောင်းတဲ့ မျက်လုံးဖက်က ပို့တဲ့ပုံရိပ်ကိုပဲ ဦးစားပေးယူပြီး ကျန်တဲ့ အားနည်းတဲ့ အလိုင်းမင်းမမှန်တဲ့ မျက်လုံးဖက်က ပုံရိပ်ကို လျစ်လျူရှုလိုက်ပါတယ်။
ကြာလာတဲ့အခါ ဦးနှောက်လျစ်လျူရှုတာခံရတဲ့ အားနည်းတဲ့မျက်လုံးဟာ ပိုအားနည်းလာပြီး အမြင်အာရုံဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးတာ၊ ကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့တာ၊ အမြင်အာရုံချွတ်ယွင်းတာတွေကို ကလေးက ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကို ဆေးပညာအရ Amblyopia သို့မဟုတ် lazy eye လို့ခေါ်ပါတယ်။
– မျက်လုံးကြွက်သားတွေအားနည်းတာ သို့မဟုတ် မျက်လုံးကြွက်သားတွေကို ထိန်းချုပ်တဲ့အာရုံကြောတွေမှာ ရောဂါပြဿနာရှိတာ
– အတွင်းတိမ်၊ ရေတိမ်ရောဂါဖြစ်တာ၊ မျက်လုံးအတွင်း အဖုအကျိတ်တည်တာ
မျက်လုံးမှာ အလင်းချိန်ညှိမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာရှိတာ (အဝေးမှုန်၊ အနီးမှုန်) စသဖြင့် အများကြီးရှိပါတယ်။
ကုသမှုအနေနဲ့ကတော့ ရောဂါအခြေအနေရယ်၊ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီး မျက်မှန်တပ်ရတာ၊ မျက်စိတဖက်အုပ်ထားရတာ၊ မျက်စိတိမ်ရှိရင် ဖယ်ရှားရတာ၊ မျက်စိကြွက်သားတွေကို ခွဲစိတ်ကုသရတာ၊ မျက်စိလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာ စသဖြင့် ကုသမှုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ မှာချင်တာကတော့ ကလေးတွေမှာ မျက်စိစွေခြင်းဖြစ်ရင် အချိန်မဆွဲဘဲ ချက်ချင်းကုသပေးဖို့ မှာချင်ပါတယ်။ အပေါ်မှာလည်း တခါပြောခဲ့ပါတယ်။
အချိန်မဆွဲဘဲကုသရင် အရှင်းပျောက်ကင်းနိုင်ကာ ကောင်းမွန်တဲ့ အမြင်အာရုံလည်းရနိုင်ပါတယ်။
အချိန်လွန်မှကုရင်ကျ တချို့တွေမှာ မျက်လုံးပြန်တည့်သွားသည့်တိုင်အောင် ဘဝတလျှောက်လုံး ကောင်းမွန်တဲ့ အမြင်အာရုံမရနိုင်တော့တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်လေးတွေကို ပြင်းထန်စွာ လှုပ်ရမ်းမိတဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ။
လူကြီးမိဘအချို့ ကလေးထိန်းအချို့တွေဟာ အသည်းယားတဲ့အခါ၊ ကလေးအငိုမတိတ်လို့ စိတ်မရှည်တဲ့အခါ၊ ဒေါသထွက်နေတဲ့အခါ စတဲ့အခြေအနေတွေမှာ ကလေးငယ်လေးတွေကို ပခုံးကနေကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် ပြင်းထန်စွာ ကိုင်လှုပ်ရမ်းတာမျိုးကို လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။
– ကလေးမလိုချင်ဘဲနဲ့ရလာတဲ့ မိဘတွေ၊ ပြင်ဆင်ထားချိန်မရှိဘဲနဲ့ ရုတ်တရက်ကလေးရလာတဲ့ မိဘတွေ
– တကိုယ်တော်မိခင် (Single Mother)၊ တကိုယ်တော်ဖခင်တွေ (Single father)
– စိတ်ကျရောဂါ ခံစားနေရတဲ့သူတွေ
– အရက်၊ မူးယစ်ဆေးတခုခုစွဲလန်းနေတဲ့သူတွေ
– အိမ်တွင်းနှိပ်စက်မှုကို ခံစားနေရတဲ့သူတွေ
မိမိကလေးဘဝတုန်းက နှိပ်စက်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့သူတွေဟာ ကလေးငယ်တွေအပေါ်မှာ စိတ်မရှည် သည်းမခံနိုင်ကြဘဲ ကလေးငယ်တွေကို ကိုင်လှုပ်ရမ်းတာမျိုးတွေ လုပ်နိုင်ခြေများပါတယ်။
လူကြီးတွေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုအလျောက် ကလေးငယ်လေးတွေကို ကိုင်လှုပ်တာဟာ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်သာ ကြာပေမယ့် ကလေးငယ်လေးတွေအတွက်တော့ တဘဝလုံးထိခိုက်နစ်နာမဲ့ အခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်လေးတွေကို ပြင်းထန်စွာ ကိုင်လှုပ်တဲ့အခါမှာ shaken baby syndrome လို့ခေါ်တဲ့ ကလေးဦးနှောက်ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း အခြေအနေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်လေးတွေမှာ သူတို့ရဲ့လည်ပင်းကြွက်သားတွေဟာ အားနည်းနေသေးတာကြောင့် ခေါင်းကို ကောင်းကောင်းမထိန်းပေးထားနိုင်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကလည်း ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သေးတာကြောင့် ဦးခေါင်းခွံနဲ့ ဦးနှောက်ကြားထဲမှာ နေရာလွတ်လေးတွေရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကလေးငယ်တွေဟာ ပြင်းထန်စွာ ကိုင်လှုပ်ခံရတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ဦးခေါင်းခွံနဲ့ပွတ်တိုက်မိပြီး ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ သွေးကြောလေးတွေပေါက်ကုန်ကာ ဦးနှောက်ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကလေးရဲ့ အရိုးတွေကျိုးတာ၊ မျက်လုံး၊ လည်ပင်းနဲ့ ခါးရိုးထိခိုက်တာတွေကိုပါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကိုင်လှုပ်ခံရတဲ့ ကလေးငယ်ဟာ အပြင်ပန်းအနေနဲ့ကြည့်ရင် တခါတရံ မျက်နှာမှာအညိုအမည်းစွဲနေတာမျိုးရှိနိုင်ပေမယ့် အများအားဖြင့် ဘာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်မှ မရှိတတ်တာများပါတယ်။
သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေမှာဆိုရင်လည်း ကလေးငယ်ဟာ ကိုင်လှုပ်ခံရပြီးပြီးချင်း ဘာလက္ခဏာမှ မခံစားရဘဲ အချိန်ကြာလာမှသာ ကလေးငယ်ရဲ့ အပြုအမူတွေပြောင်းလဲလာတာ၊ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းလာတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေဆိုရင်တော့ ကိုင်လှုပ်ခံရပြီးသိပ်မကြာခင်မှာ
– ကလေးငယ်ဟာ အရမ်းမှိန်းလွန်းတာ သို့မဟုတ် ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်လွန်းတာ
– အစာသိပ်မစားတာ၊ နို့သိပ်မစို့တော့တာ
– အသက်ရှုရခက်တာ၊ မောတာ
– အသားအရေအရောင်ဟာ ပြာလာတာ
– သတိလစ်စသဖြင့် ခံစားရပြီး အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရနိုင်ပါတယ်။
မိဘတွေအနေနဲ့ မိမိကလေးမှာ ဒီလိုလက္ခဏာတွေခံစားနေရပြီဆိုရင် သို့မဟုတ် ကလေးငယ်မှာ မူမမှန်တာတခုခုရှိနေပြီဆိုရင် သို့မဟုတ် ကလေးငယ်ကို တယောက်ယောက်က ကိုင်လှုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ သံသယရှိရင် အချိန်မဆွဲဘဲ ချက်ချင်း နီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးခန်းပြသပြီး shaken baby syndrome ဟုတ်မဟုတ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ တချို့သောရောဂါတွေရဲ့ လက္ခဏာတွေဟာလည်း Shaken baby syndrome မှာဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာတွေနဲ့ ဆင်တူတတ်လို့ပါ။
စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေအနေနဲ့ကတော့ ကလေးမျက်လုံးထဲမှာ သွေးထွက်နေမနေ ကိရိယာနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ရှု့တာ၊ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်ရိုက်တာ (CT scan)၊ သံလိုက်ဓါတ်မှန်ရိုက်တာ (MRI scan) စသဖြင့် လုပ်ရနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုတွေစစ်ဆေးကြည့်လို့ ဟုတ်ခဲ့ရင် ချက်ချင်းကုသဖို့ လိုပါတယ်။
Shaken baby syndrome ဖြစ်တဲ့ ကလေးငယ်အတော်များများဟာ အသက်သေဆုံးနိုင်ခြေများပါတယ်။
Shaken baby syndrome ဖြစ်ပြီး အသက်မသေတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာလည်း မျက်စိအမြင်အာရုံချို့ယွင်းတာ၊ သင်ကြားနိုင်မှုစွမ်းရည်ချို့ယွင်းတာ၊ ဖွံဖြိုးမှုနောက်ကျတာ၊ အတက်ရောဂါဖြစ်တာ၊ Cerebral Palsy ဆိုတဲ့ ကိုယ်ဟန်အနေအထားနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပုံမှန်မဖြစ်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပြီးမသန်စွမ်းဖြစ်သွားတာ စတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပြီး တဘဝလုံး ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ လိုသွားနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ ကလေးငယ်တွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုင်လှုပ်မှသာ Shaken baby syndrome ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘဲ အသာအယာကိုင်လှုပ်ရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကလေးငယ်တွေကို ကိုင်ဆောင့်ပြီး လှုပ်ရမ်းခြင်းကို ပညာရှင်များက ကလေးငယ်အကြမ်းဖက်မှု၊ ညှင်းဆဲမှု တရပ်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားပြီး မည်သည့်အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းနဲ့မှ ကလေးငယ်လေးတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုင်လှုပ်ခြင်းရော အသာအယာကိုင်လှုပ်ခြင်းရော လုံးဝ မပြုဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ အကြံပေးချင်တာကတော့ မိဘများအနေနဲ့ မိမိကလေး ကလေးတအားငိုနေတဲ့အခါနဲ့ မိမိစိတ်မကြည်တဲ့အချိန်နဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ကလေးကို ဒေါသထွက်ပြီး ကိုင်လှုပ်တာမျိုး လုံးဝမလုပ်မိဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ကိုယ်အရမ်းပင်ပန်းပြီး စိတ်ဖိစီးမှုများနေပါက မိဘဆွေမျိုးကို အကူအညီတောင်းပါ။ သို့မဟုတ် ကလေးထိန်းငှားပါ။
ကလေးထိန်းငှားတဲ့အခါ ကိုယ့်ဆွေမျိုးမိဘတွေကို အကူအညီတောင်းတဲ့အခါတွေမှာလည်း ကလေးထိန်းကို ကလေးအား ဘယ်လိုအခြေအနေမှာမှ ကိုင်လှုပ်တာမျိုးမပြုလုပ်စေဖို့ သေချာမှာထားဖို့ လိုပါတယ်။
ကလေးငယ်များ သန်စွမ်းထက်မြက် ဉာဏ်ရည်တက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓါတ်
ဒယိုင်းဒယိုင်နဲ့ လမ်းလျှောက်တတ်ခါစ တနှစ်ကနေ တောက်တောက် တောက်တောက်နဲ့လျှောက်သွားတတ်တဲ့ နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်အရွယ်ကို ဆေးပညာအရ Toddler age (တော်ဒလာအရွယ်) လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒီတော်ဒလာ (toddler age) အရွယ်ကာလဟာ ကလေးတစ်ယောက်၏ အလုံးစုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဓိကကျတဲ့ ကာလတစ်ခုပါ။
ဒီကာလမှာ ကလေးရဲ့အရပ်ဟာ မွေးခါစထက် နှစ်ဆရှည်လာပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ဟာလည်း
မွေးတုန်းကအလေးချိန်ရဲ့ ငါးဆခန့်အထိ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အဲ့ကာလအတွင်းမှာ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကတည်ဆောက်နေဆဲ အချိန်ဖြစ်သောကြောင့် မျှတဲ့အာဟာရရှိဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
ကလေးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်း (၅) ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ Bone (အရိုး), Brain (ဦးနှောက်ဉာဏ်), Vitality (ကြံခိုင်မှု), Digestion (အစာချေခြင်း)နဲ့ Immunity (ကိုယ်ခံစွမ်းအား) ဆိုတာတွေပါ။
Bone (အရိုး) တွေဖွံဖြိုးကြီးထွားမှ ကလေးက အရပ်ရှည်လာမှာပါ။ အရိုးတွေ ဖွံဖြိုးကြီးထွားဖို့အတွက် ကယ်လ်ဆီယံဓါတ်နဲ့ ဗီတာမင်ဒီ ရဖို့လိုပါတယ်။ ကယ်လ်ဆီယံဓါတ်နဲ့ ဗီတာမင်ဒီက နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ အများဆုံးပါပါတယ်။
Brain (ဦးနှောက်ဉာဏ်) ဖွံဖြိုးမှ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေ၊ စာတွေ ကျက်မှတ်တာတွေ၊ သင်ယူတာတွေ လုပ်နိုင်မှာပါ။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် Docosahexaenoic acid (DHA) လို့ခေါ်တဲ့
အိုမီဂါသရီးဖက်တီ အက်စစ်ဓါတ် (Omega3Fatty Acid) က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအိတ်အေလို့ခေါ်တဲ့ အိုမီဂါသရီးဖက်တီးအက်စစ်ဓါတ်က ငါးမှာ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။
Vitality (ကြံခိုင်သန်စွမ်းဖို့) အတွက်ကတော့ ပရိုတင်းဓါတ်နဲ့ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဓါတ်က အရေးကြီးပါတယ်။ ပရိုတင်းဓါတ်က အသားအမျိူးမျိူး၊ ပဲအမျိူးမျိူးမှာ အများဆုံးပါပါတယ်။ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဓါတ်ကတော့ ထမင်း၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း စတာတွေမှာပါပါတယ်။
LcFOS (Long Chain Fructo Oligosaccharides) က ကျန်းမာသော အစာချေစနစ် ဖြစ်စေရန် ကူညီထိန်းသိမ်းပေးသည့် အမျှင်ဓာတ်တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့အတွက် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်ပြီး ရောဂါပိုးများ မဝင်ရောက်နိုင်အောင်လည်း အပြည့်အဝ ကာကွယ်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။ LcFOS ကကြွယ်ဝတဲ့ အစာတွေကတော့ အာလူး၊ ကြက်သွန်၊ ဂျုံစတာတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပါ။
Immunity (ကိုယ်ခံစွမ်းအား) ကောင်းမှ ပြင်ပကနေ ရောဂါပိုးတွေ အလွယ်တကူမဝင်ရောက်နိုင်မှာပါ။ ကလေးငယ်တွေဟာ ငယ်ရွယ်နုနယ်သေးတာကြောင့် လူကြီးတွေထက်စာရင် ရောဂါပိုးတွေဟာ ပိုပြီးလွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဒီတော်ဒလာအရွယ် (Toddler age) နောက်ပိုင်း မူကြိုစထားတဲ့ အရွယ်မှာဆိုရင် မိမိအိမ်နဲ့မိခင်ရဲ့ ရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်မှုကနေ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ထိတွေ့ရတဲ့အခါမှာ ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်ခံရဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများပါတယ်။ အများအားဖြင့် လေထဲကနေတဆင့် ကူးစက်ခံရတာ များပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းအောင် အစာအာဟာရပြည့်ဝစွာ ကျွေးတာအပြင် လက်ခဏခဏဆေးတာ၊ အိမ်သာတက်ပြီးတိုင်းနဲ့ ထမင်းမစားခင်တိုင်းမှာ လက်ကို စင်ကြယ်အောင် ဆေးဖို့လိုတာ၊ လူထူဖုန်ထူတဲ့ နေရာသွားရင် နှာခေါင်းစည်းတပ်ဖို့လိုတာတွေကို ကလေးတွေ နားဝင်အောင် ချော့ပြောပြဖို့လည်း လိုပါတယ်။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ကတော့ (၄) နှစ်ကျော် အရွယ်ကနေ ၁၀ နှစ်ထိဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သင်ယူလေ့လာဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ပေးရမယ့် အရွယ်ပါ။ ဒါ့အပြင် အတွေ့အကြုံသစ်များစွာကိုလည်း ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားတွေးခေါ်သုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်လာပြီ ဖြစ်သလို လျှင်လျှင်မြန်မြန် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့လည်း လိုအပ်လာပါပြီ။
ဒါကြောင့် မိဘများအနေနဲ့ မိမိရင်သွေးငယ်များကို သူများကလေးတွေထက်စာရင် နောက်ကောက်ကျမနေစေရန် အသား ငါး ဟင်းသီးဟင်းရွက် သစ်သီးဝလံ နို့ စတာတွေကို မျှတအောင်ကျွေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
Source : On doctor
ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာ ကလေးငယ်တွေအတွက် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံအကြံပြုချက်များ
ကလေးငယ်သက်တောင့်သက်သာရှိစေမယ့် ချည်သားပါးပါးလေးတွေဟာ အသင့်တော်ဆုံးပါ။ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နဲ့လိုက်လျောညီထွေရှိမယ့် အဝတ်အစားမျိုးတွေဝတ်ဆင်ပေးရပါမယ်။အရောင်ဖျော့ဖျော့လေးတွေဟာ နွေရာသီမှာဝတ်ဆင်သင့်တဲ့အရောင်လေးတွေပါ။ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကိုလည်း ဂရုစိုက်ပါ။နေပူထဲထွက်ချိန်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားနဲ့ Air con ခန်းထဲဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးငယ်ရဲ့အပူချိန်ကို မကြာမကြာစမ်းသပ်ပြီး လိုအပ်ရင်အကျီင်္ထပ်ဝတ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ပြတင်းပေါက်တွေဖွင့်ထားပါ။နေရောင်သိပ်ရှိန်လွန်းတဲ့အခါမျိုးမှာ နေရောင်ကိုလိုက်ကာစတာမျိုးနဲ့ကာထားပြီး လျှပ်စစ်ပန်ကာရဲ့အကူအညီကိုယူနိုင်ပါတယ်။လေအေးအေးလေးဖြစ်အောင်ပန်ကာရဲ့ရှေ့မှာ ရေအေးဇလုံတစ်ခုကိုထားနိုင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်ကို တစ်နေ့ကိုရေအေးအေးလေးနဲ့ ၂ ကြိမ်အနည်းဆုံးချိုးပေးသင့်ပါတယ်။
ကလေးငယ်အိပ်တဲ့အခန်းမှာ ရေခဲတုံးကြီးကြီးတစ်တုံးကို ဇလုံထဲထည့်ထားပေးရင် လေထုကအေးမြနေမှာပါ။
ကလေးငယ်စိတ်မကြည်ဘဲ ဂျီကျနေရင် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တက်လာတဲ့အတွက် ဂျီမကျအောင်ထားသင့်ပါတယ်။
နို့စို့အရွယ်ကလေးဆိုရင်လည်း နို့မကြာခဏတုိုက်ပေးပါ။နို့စို့အရွယ်မဟုတ်ရင်တော့ ရေ နဲ့သစ်သီးဖျော်ရည် နွားနို့တို့လိုမျိုး အရည်များများတိုက်ပေးပါ။
နေရောင်ကာလိမ်းဆေးကတော့ အသက် ၆လဆအာက်ကလေးတွေမှာ မလိမ်းပေးသင့်ပါဘူး။၆ လအထက်ကလေးတွေကိုလိမ်းပေးမယ်ဆိုရင်လည်း တည့်မတည့်အရင်စမ်းပြီးမှ လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။
SPF 15 မကျော်တဲ့ နေရောင်ကာလိမ်းဆေးမျိုးကိုအသုံးပြုပါ။
Source - http://mydoctor.com.mm
ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလ ??? ( အချိန် ၂ မိနစ်ပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ )
အရွယ်ရောက်နေတဲ့လူငယ် ၈ဝဝ လောက် ကို လေ့လာကြည့်တော့ ငယ်စဉ်တည်းက အရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေဟာ ကြီးလာရင် ပိုမိုကြမ်းကြုတ်ရိုင်းစိုင်းလာကြောင်း Texas ဆေးတက္ကသိုလ်မှတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငယ်စဉ်တည်းက အရိုက်ခံခဲ့ရတော့ အမှားတစ်ခုခုလုပ်မိရင် ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်အောင်လုပ်မှ ပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ သူတို့စိတ်ထဲမှာ စွဲမြဲသွားတတ်ကြတယ်။
ဒီစိတ်အစွဲကြောင့် လူဟာအရွယ်ရောက်လာလေ ပိုမိုကြမ်းကြုတ်လေဖြစ်ပြီး မိဘနဲ့သားသမီးကြားပိုမိုရှုပ်ထွေးတဲ့ ဆက်ဆံတွေရေးတွေသာ ရှေ့လျှောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
တစ်ခုခုအမှားလုပ်မိရင် သင်ခန်းစာယူတတ်အောင် လမ်းမပြပေးပဲ ကလေးကို ရိုက်နှက်ဖို့သာ တာဆူနေတဲ့မိဘတွေကြောင့် ကလေးရဲ့အနာဂတ်ဟာ မလှပတော့ဘူး။
အသက် ၁၉နှစ်နဲ့ ၂ဝ ဝန်းကျင်ကြားက လူငယ်လေးတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကျောင်းမှာ မကြာခဏ ရန်ဖြစ်လို့ ဒဏ်ပေးခံရ၊ မိဘအခေါ်ခံရတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုပေါ့… သုတေသီတွေက မေးခွန်းလေးတွေထုတ်ကြည့်ခဲ့တယ်။
သူတို့ငယ်စဉ်ဘဝမှာ အရိုက်ခံခဲ့ရတာ ၆၈ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတာတွေ့ရတယ်။ ဒီလိုမျိုးဝုန်းဒိုင်း
ကြဲပြီး ပြဿနာဖြေရှင်းလိုက်လို့ သူတို့မှာ နောင်တရခြင်းလည်းမရှိဘူး။ တစ်ဖက်မှာ ဘယ်လောက်ထိနစ်နာသွားမလဲ.. ဒါတွေထည့်မတွက်တတ်တော့ဘူး။
တစ်ယောက်ယောက်ကို နာကျင်အောင်လုပ်လိုက်မှသာ သူတို့စိတ်ဖိစီးနေတာတွေလျော့ကျသွားမယ်လို့ တွေးထင်လာကြတယ်။
နောက်ပြီး ကလေးကို ခါးပတ်နဲ့ရိုက်တဲ့အကျင့်။ အခန့်မသင့်လက်လွန်သွားရင် အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အခြားကလေးတွေနဲ့ယှဉ်ရင်သူတို့ စိတ်ထဲအားငယ်နေရတတ်ပါတယ်။
တစ်ခုခုအဆင်မပြေဖြစ်တိုင်း မိဘကို ရင်မဖွင့်ရဲတော့ဘူး။ စိတ်ထဲ သိမ်းဆည်းထားများပြီး မွန်းကြပ်လာမယ်။ နောက်ဆုံး ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေနဲ့ အတွေးတွေနောက်ကျိလာတော့တယ်။
အနာဂတ်ကြယ်ပွင့်လေးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ရာမှာ နည်းစနစ်ကျမှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့များစွာသော လုပ်ငန်းတွေမှာ သူတို့တစ်ချိန် ဦးမဆောင်နိုင်ဘူးလို့ ဘယ်ပြောလို့ရမလဲ? ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အချို့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ်၊ဆွီဒင် နဲ့ စကော့တလန်တို့မှာကလေးကိုရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်းအား ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။
အင်္ဂလန်မှာဆို လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ ကလေးကို ပြစ်ဒဏ်ပေးနေတယ်ဆိုရင် ဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
အမေရိကန်မှာတော့ ကလေးကိုရိုက်နှက်တာ တရားဝင်ပေမယ့် ခုနကလိုပဲ အပြစ်ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်း ခိုင်လုံမှဖြစ်ပါမယ်။
တစ်ချို့မိဘတွေက ဒီကလေးတွေ အသားနာမှ မှတ်မယ် ၊ ဒါမှ ကောင်းကောင်းနားလည်မှာလို့ ယူဆထားကြပါတယ်။ ကောင်းဖို့ဆိုတာထက် အဆိုးကပိုများပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်ကို သေချာနားလည်အောင် လုပ်ဖို့က မိဘတွေရဲ့တာဝန်ပါ။
ဘယ်လိုလမ်းပြပေးရင် ကလေးက သင်ယူတတ်မြောက်လွယ်တယ်ဆိုတာ မိဘတွေကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်မယ်လေ။ ကမ္ဘာကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲအောင် တစ်ချိန်မှာ လုပ်ဆောင်လာမယ့် အနာဂတ်ကြယ်ပွင့်လေးတွေကို သေချာလမ်းပြသွန်သင်ပြီး ပျိုးထောင်ကြရအောင်လား🌻🌻🌺🌸🌹
🔺Crd to Rightful Owner
“ဟဲ့ ကလေးလေးက မျက်ခုံးလေးတွေ ပါးလိုက်တာ..ကွမ်းရိုးလေးနဲ့ ဆွဲပေးလေ”ဟူသော စကားသံမျိုးကို မိဘတော်တော်များများ ကြားဖူးကြမှာပါ။
ခေတ်ပေါင်းများစွာ လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည့် ရှေးမြန်မာတို့၏ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနည်းလမ်းများက မှန်ကန်သင့်တော်တာတွေရှိသလို ယနေ့ခေတ်ဆေးသိပ္ပံပညာအမြင်နှင့် မလျော်ကန်တာတွေလည်းရှိ၏။
အချို့က သေချာပေါက်ဘေးဖြစ်စေသော်လည်း အချို့ကား သိသိသာသာ အကျိုးဖြစ်စေ၏။
အချို့မှာကား ဘေးမဖြစ်စေသော်လည်း အကျိုးတစုံတရာ ဖြစ်ထွန်းမည်မဖြစ်ထွန်းမည် မသေချာ။
ကွမ်းရိုးနှင့် မျက်ခုံးမွှေးဆွဲပေးခြင်းသည် အထက်ပါ တတိယအုပ်စုတွင်ပါဝင်၏။
အန္တရာယ် မဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း အမှန်တကယ် အကျိုးဖြစ်မဖြစ် လေ့လာထားသော သုတေသနစာတမ်းများမူ နိုင်ငံတကာတွင်လည်း မတွေ့ရ။
မည်သူမဆို ‘လှချင်လို့’ ဟုသာ ဖြေမည် မုချ။
မိဘတိုင်းမိမိသားသမီးကို မျက်လုံးမျက်ခုံး လှစေချင်သည်။
မျက်ခုံးထူထူလေးတစ်ခုက မျက်နှာလှလှလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်မဟုတ်လား။
မျက်ခုံးထူထူလေးတစ်ခုကြောင့် ပိုလှပချောမောစေသလို ၎င်း၏ အဓိကတာဝန်ဖြစ်သော မျက်လုံးကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် ချွေး၊အမှုန်အမွှား၊ နေပူဒဏ်တို့မှလည်း အထိုက်အလျောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်၏။
အချို့ကား မျိုးရိုးဗီဇအရ သဘာဝ၏လက်ဆောင်အဖြစ် မျက်ခုံးမွှေးထူထူလေး ပါလာကြသော်လည်း အချို့အတွက်တော့ မျက်ခုံးမွှေးကံကြမ္မာကား ကျိုးတိုးကျဲတဲ။
မည်သည့်အရာမဆို သဘာဝအတိုင်းသာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် မှန်သော်လည်း မိဘ၏ မေတ္တာနှင့် လှစေချင်စိတ်က သဘာဝတရားကို အံတုသာလွန်ချင်လာသောအခါ ကလေးလေး ပိုချောပိုလှဖို့ရာ ကြိုးစားကြလေသည်။
နှာတံလေးပေါ်အောင် ပုံသွင်းတတ်ကြသလို မျက်ခုံးမွှေးကိုကွမ်းရိုးနှင့်ဆွဲပေးကြ၏။
နိုင်ငံတကာတွင်တော့ အခြားနည်းလမ်းများသုံးကြသော်လည်း မြန်မာ့ရိုးရာတွင်မူ ကွမ်းရိုးဆွဲသည့် ဓလေ့သာလူသိများ၏။
”ကွမ်းရိုးနဲ့မျက်ခုံးဆွဲပေးရင် ကလေးမျက်ခုံး တကယ်ထူလာမှာလား”
မျက်ခုံးတကယ်ထူမထူထက် မဆွဲခင် ဘာသတိထားရမည် ဆိုသည်က ပိုအရေးကြီး၏။
သေချာစွာဆေးကြောထားဖို့လို၏။ ရေနွေးနှင့် ပိုးသတ်ထားသင့်၏။
တစ်လအောက် ကလေးများတွင် အလွန်နုနယ်သေးသဖြင့် မလုပ်သင့်။
ကလေးဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်သင့်၏။
ကလေးအသားအရေနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ အနီကွက်ထလာခြင်း၊ အနာဖြစ်ခြင်းများဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ဆုံးပြသရမည်ဖြစ်သည်။
ကွမ်းရွက်နှင့် ကွမ်းရိုးသည် နိုင်ငံတကာ သုတေသနများအရ အလွန်ဆေးဘက်ဝင်၏။
Antioxident ဂုဏ်သတ္တိရှိသလို Niacin,Thiamin,Riboflavin,Carotene နှင့် Vitamin C စသည့် ဗိုက်တာမင်များလည်း အလွန်ကြွယ်ဝ၏။
Chavicol ဟူသည့် Polyphenol ဓာတ်တစ်မျိုးပါဝင်သည့် အတွက် အချို့ရောဂါပိုးမွှားများကိုပင် သေစေနိုင်သော အာနိသင် ရှိပေသည်။
ခေါင်းအစခြေအဆုံး ရောဂါမျိုးစုံအတွက် ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းရိုး၏ ဆေးဖက်ဝင်ပုံကို လေ့လာထားသည့် သုတေသနများစွာရှိသော်လည်း မျက်ခုံးထူစေသည့် အချက်ကိုကား သုတေသနမရှိသေးပေ။
ဤနေရာတွင် စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်တစ်ချက်တွေ့ရ၏။
နိုင်ငံတကာတွင် ကလေးမျက်ခုံးထူစေရန် ပြုလုပ်သည့် နည်းလမ်းများပင်။
”နိုင်ငံတကာမှာ ကလေးမျက်ခုံးထူဖို့ ဘာနည်းလမ်းတွေသုံးကြလဲ”
ယင်းနည်းလမ်းများတွင် ကလေး၏ မျက်ခုံးအား ဆီတစ်ခုခု အနည်းငယ် ဂွမ်းနှင့်တို့ပေးပြီး နှဖူးဘက်သို့ ဦးတည်၍ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နူးနူးညံ့ညံ့ နှိပ်နယ်(Masseage)ပေးခြင်းပါဝင်၏။
ကြက်ဆူဆီ၊ အုန်းဆီသန့်သန့်၊ Almond oil၊ သံလွင်ဆီ၊ ကြက်ဥအကာ၊ ရှားစောင်းလက်ပတ် စသည်တို့ကို အသုံးပြု တတ်ကြသည်။
ဓာတ်မတည့်မည့် Allergy ပြဿနာကို ကြောက်၍ Patch test လုပ်၍ တည့်မတည့် စမ်းသပ်ပြီးမှ လုပ်တတ်ကြသည်။ တစ်ပါတ်လျှင် သုံးလေးရက် ခန့် လုပ်ပေးလျှင် ကလေးမျက်ခုံးထူ၍ သန်စွမ်းလာမည်ဟု သူတို့လည်း ယုံကြည်ကြ၏။
– မုန်လာဥနီ၊ ကန်စွန်းဥ၊ ပန်းငရုတ်ပွ စသည့် ဗိုက်တာမင်A ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ
– လိမ္မော်သီး၊ ရှောက်သီး၊ သံပရိုသီး၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ သင်္ဘောသီး စသည့် ဗိုက်တာမင်C ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ
– မြေပဲ၊ သံလွင်ဆီ၊ ပင်စိမ်း၊ Almonds ၊ ဟင်းနုနွယ် အစရှိသည့် ဗိုက်တာမင်E ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ
– ထောပတ်သီး၊ သစ်ကြားသီး၊ သံလွင်ဆီ၊ ဆလ်မွန်ငါး စသည့် Omega-3 fatty acids ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ
– ဥအမျိုးမျိုး၊ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုး၊ ထောပတ်သီး၊ ဆလ်မွန်ငါး စသည့် Biotinဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများပင် ဖြစ်သည်။
၎င်း အစားအစာများမှာ မျက်ခုံးတစ်ခုတည်းအတွက်သာမက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအတွက်ပါ အသက်ရှည် ကျန်းမာစေမည့် အစားအသောက် အဟာရဓာတ်များလည်း ဖြစ်ပေသည်။ ကလေးများသာမက မျက်ခုံးထူထူလှလှလိုချင်သော လူကြီးများအတွက်ပါ အကျိုးရှိသည်ဟု ဆိုကြ၏။
သို့ဖြစ်ရာ နိဂုံးချုပ်ဆိုရသော် ကွမ်းရိုးနှင့်ဆွဲပေးခြင်းက မျက်ခုံးကို Massage လုပ် နှိပ်နယ်ပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်စေပြီး ၎င်းတို့ ဆိုသလို မွှေးညှင်းပေါက်များဆီသို့ သွေးပိုလျှောက်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးရာမှ တစ်ဆင့် မျက်ခုံးထူလာနိုင်ခြင်းကြောင့် ရိုးရာအစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းများလားဟု စဉ်းစားစရာပင်။
ကွမ်းရွက်နှင့် ကွမ်းရိုးတွင်ပါဝင်သော ဆေးဖက်ဝင် ဓာတ်ပစ္စည်းများ အရေပြားအတွင်း စိမ့်ဝင်ခြင်းကြောင့် ဟုတ်မဟုတ်အတွက်မူကား သုတေသနများမရှိသေး၍ အတိအကျမပြောနိုင်သေးပေ။
ကွမ်းရိုးဆွဲပေးသည့် ဓလေ့ကတော့ မြန်မာတည်သရွေ့ဆက်လက်တည်ရှိနေဦးမည်ကတော့ အသေအချာပင်။
http://mydoctor.com.mm/ မှ ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။